Apple manafaingana ny ezaka amin'ny fiara mitondra fahaleovan-tena | Avy amin'ny mac aho
Apple manafaingana ny ezaka amin'ny fiara mitokana
Tamin'ny volana aprily lasa teo dia nanomboka nanandrana ny rafitry ny mpamily mahaleo tena miaraka amin'ny fiara 3 any California i Apple. Nanomboka tamin'io volana io dia nanatsara ny rafitr'izy ireo i Apple tamin'ny alàlan'ny tatitra voarainy tamin'ireo fiara telo nananany mivezivezy, saingy toa tsy ampy izy ireo.
Araka ny hitantsika ao amin'ny Bloomberg, Nanitatra ny isan'ny fiara mizaka tena i Apple mivezivezy any California ho an'ny rafitra mitondra fiara mizaka tena izay novolavolain'ny orinasa, raha ny filazan'ny mailaka sasany navoakan'ny Departemantan'ny Fiara Fitateram-bahoaka any California.
Araka ny filazan'i Bloomberg, ny isan'ny fiara mizaka tena ankehitriny, miaraka amina mpanamory fiaramanidina miandraikitra ny fifehezana ny fiasan'ny fiara amin'ny fotoana rehetra, dia 27 ankehitriny Fiara 24 hafa. Mbola ny fiara ampiasaina ihany no Lexus RX450h. Apple dia manao izay rehetra azo atao mba hanandramana sy hanakaikezana ny iray amin'ireo mpitondra amin'izao fotoana izao eo amin'ny sehatry ny familiana tsy miankina: Alfafika Waymo, fa rehefa tara vao tonga tany an-tsena, toy ny fanaontsika tato ho ato, ity rafitra ity dia tokony hamidy amin'ireo mpamokatra fiara. fiara no ho iray amin'ireo farany tonga ary angamba rehefa tonga izany, ny anjaran'ny tsena eo amin'ireo mpanamboatra izay tratrany dia kely dia kely.
Na dia mamerina ny tsaho voalohany mifandraika amin'ny drafitry ny fiara ao Apple aza izahay, ny fiara voalohany niely tamin'ity teknolojia ity dia natao tamin'ny 2014, rehefa natao ampahibemaso ireo tatitra momba ny tetikasa Titan. Nasongadin'ity tetikasa ity fa mpiasa maherin'ny 1.000 no miasa amin'ny famolavolana fiara elektrika iray, saingy rehefa mandeha ny fotoana, ary alohan'ny olana sedrain'ny orinasa dia nanapa-kevitra ny hanokana ny tenany amin'ny famolavolana rafitra mitondra fiara mahaleo tena izy. rafitra mitondra fiara mahaleo tena izay nohamafisin'i Tim Cook tenany tamin'ny fahavaratra lasa teo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple manafaingana ny ezaka amin'ny fiara mitokana
Apple mangataka andian-dahatsoratra vaovao avy amin'ny talen'ny La La Land Damien Chazelle